Xiaomi Max bụ ọkwa gọọmentị | Akụkọ akụrụngwa
Ka ọtụtụ ụbọchị gasịrị nke ọtụtụ asịrị dị n'ime ya na nke kachasị nke anyị ga-atachi obi na vidiyo dị iche iche, nke jọgburu onwe ya na ọchịchịrị, ọhụụ ọhụrụ Xiaomi Max ka gosipụtara n'ihu ọha. Ngwaọrụ mkpanaka a sitere n'aka onye nrụpụta China nke taa egosipụtakwara ihe ọhụrụ Xiaomi nke 4K, na-anọchi anya maka nnukwu ihuenyo ya nke enweghị ihe ọ bụla na ihe na-erughị 6,4 sentimita asatọ.
Nke a na-emecha ezinụlọ na-adọrọ mmasị nke Xiaomi nwere n'ahịa ahụ, nke na-eduga Xiaomi Mi5, nke e gosipụtara na World Mobile Congress ikpeazụ emere na Barcelona na na ugbu a, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ezigbo ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a Xiaomi Max anyị nwere ike ịsị na ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị niile na-achọ ngwaọrụ mkpanaka nwere nnukwu ihuenyo, iji nwee ọ enjoyụ, dịka ọmụmaatụ, nnukwu ọdịnaya nke ọtụtụ ọdịnaya, na-enweghị ike iota nke ike yana ọnụ ala belata .
1 Atụmatụ nke Xiaomi Mi Max
Atụmatụ nke Xiaomi Mi Max
Akụkụ; 173,1 x 88,3 x 7,5 mm
Ibu nke gram 203
6,44-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD mkpebi nke 1.920 x 1.080 pikselụ
Isi ihe isii nke Snapdragon 650 nke ọ bụla na-agba ọsọ na 1.8 / 1.4 GHz
Adreno 510 ndịna-emeputa ihe eserese
2 ma ọ bụ 3 GB Ram ebe nchekwa, ọ bụ ezie na a ga-enwekwa a adịchaghị version nke 4GB nke Ram
Nchekwa dị n'ime nke 16, 32 ma ọ bụ 0 GB nwere ike ịgbasa na ikpe abụọ site na kaadị microSD
Igwefoto na-eji ihe mmetụta 16 megapixel na igwefoto dị n’ihu nwere ihe mmetụta 5 megapixel
4.850 mAh batrị
Gam akporo 6.0.1 Marshmallow sistemụ arụmọrụ na MIUI 8 nhazi ọkwa ọhụrụ
Ọ ga-adị na ahịa na agba; isi awọ, ọlaọcha na ọla edo
N'ihi njirimara ndị a, anyị nwere ike ikwu nke ahụ na Xiaomi Max ga-abụ otu n’ime akụkụ kachasị ike n’ahịa, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe a tụrụ anya ya. Ọtụtụ asịrị rụtụrụ aka na ngwaọrụ a nwere ihe nhazi Snapdragon 820, nke ụfọdụ nnukwu ọkọlọtọ dị n'ahịa ahụ na-arị elu, mana ọ mechara nọrọ na ya. Snapdragon 650 / 652 na ọ bụ ezie na ọ dịghị njọ ma ọlị, ọ bụ nhazi usoro.
Ihe nchekwa 2 ma ọ bụ 3 GB RAM nwere ike iyi ka ọ gaghị ezu, ọ bụ ezie na ị na-echebara nhazi ahụ ọ karịrị. Banyere nchekwa dị n'ime anyị ga-enwe nsụgharị abụọ dị, otu n'ime 16 GB na nke ọzọ nke 32 GB, n'okwu abụọ nwere ike ịgbasa ya site na kaadị microSD nke ga-eme ka anyị chefuo nsogbu oghere ọ bụla anyị nwere.
Nke a Xiaomi Max ga-abụ otu n’ime ihe kachasị dị egwu ma na-atọ ụtọ n’ahịa, ọ bụ ezie na anyị niile tụrụ anya ihe ọzọ site n’aka ndị nrụpụta China nke gaara enweta site na itinye Snapdragon 820 dị ike na ebe nchekwa RAM dị elu, ee, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị; Ọ dị mkpa na ọdụm a?
Na nnukwu ikike batrị nke gbagoro na 4.850 mAh, dịka ọmụmaatụ dị elu karịa Mi Note nke nọrọ na 3.000 mAh. N'ebe a, n'ezie, nha ihuenyo ahụ na-abanye n'ime oke na nnukwu nha, ogo batrị dị elu. Olileanya na 4.850 mAh ndị a ezuola inye anyị nnwere onwe nke na-enye anyị ohere iru ngwụcha ụbọchị na enweghị nsogbu ọ bụla.
Banyere imewe nke Xiaomi Max a Anyị bụ ngwaọrụ nke dabara na ihe anyị hụrụla na ntanetị ọhụrụ nke ndị nrụpụta China. Ọdịdị ya, anyị nwere ike ịsị na ọ dị ka Xiaomi Mi 5 na ọtụtụ ndị ama ama amalite na ahịa n'oge na-adịbeghị anya site na Xiaomi.
Otu n'ime ihe kachasị adọta uche nke ọdụ a bụ obere friji o nwere n'ihu ya ọkachasị ihe onyonyo nke Xiaomi bipụtara, nke ọtụtụ ndị ọrụ bu Xiaomi Max n'akpa uwe ogologo ọkpa ma ọ bụ jaket. Ma hà na-aghọgbu ọtụtụ ma ọ bụ na ndị na-emepụta China akwụgoro ndị dike ka ha nwee ike ịme foto nkwado ndị a.
Dika anyi nwere ike ihu na vidio mgbasa ozi nke na-egosi n'oge na-adịbeghị anya, a kwadoro nkwenye mkpịsị aka na azụ, nke anyị ga-enyocha ma ọ bụrụ na ọ dị mma itinye ya na ebe ahụ n'ihi oke nke Xiaomi Max a. .
Dị ka anyị mụtara, ngwaọrụ a ga-adị dị na ọla edo, isi awọ na ọlaọcha. Ikekwe ọtụtụ n'ime anyị na-atụ uche ụcha ojii nke ga-ekwe ka anụ ọhịa dị ka nke a Xiaomi ga-ntakịrị ntakịrị.
Ugbu a Obebeghị mgbe Xiaomi Max ọhụrụ a ga - adị na ahịaỌ bụ ezie na a ga-eche n'echiche na, dịka o mere na ngwaọrụ ndị ọzọ sitere na ndị na-emepụta China, nnweta ga-adị ngwa ngwa.
Ọnụahịa ndị ọzọ dị ugbu a bụrịrị nke gọọmentị, maka ahịa ndị China, ọ bụkwa ha ka anyị na-egosi gị n'okpuru;
3 GB nke Ram + 32 GB nke nchekwa dị n'ime maka ihe dị ka euro 200 ịgbanwe
3 GB nke Ram + 64 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ihe dị ka euro 230 iji gbanwee
4 GB nke Ram + 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ihe dị ka euro 270 iji gbanwee
Maka ọnụahịa, anyị ga-ahụ onwe anyị na ọnụ ala dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na anyị lelee nhọrọ ndị yiri ya nke anyị nwere na ahịa. Dịka ọmụmaatụ, Huawei P8 Max nwere nha ihu nha yiri nke a, agbanyeghị na ọnụahịa ya rịrị elu karịa euro 500. Xiaomi Max a na-etu ọnụ na ihuenyo, nkọwa, mana ọnụahịa na nke ahụ bụ na ihe na-erughị euro 300 anyị nwere ike ịzụta phablet ọhụrụ a.
N'ezie, ọ dị mkpa icheta na ọnụahịa ndị a bụ maka ahịa ndị China, ọ gwụla ma anyị zụrụ ya site na otu narị narị ụlọ ahịa ndị China anyị nwere ike ịnye site na netwọkụ nke netwọkụ, anyị ga-akwụ ụgwọ dị elu, na Gbanwee maka ịzụta ya na uzo ozo na Spain site na ndi ozo kemgbe oge a enweghi Xiaomi Max, ma obu ihe Xiaomi ozo na Spain.
Kedu ihe ị chere gbasara Xiaomi Max ọhụrụ a gosipụtara taa?. You nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka nkọwa nke post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla anyị nọ ma na-achọsi ike ka gị na gị kparịta ụka maka ịdị mma ma ọ bụ ịzụta ekwentị mkpanaaka nwere ihuenyo nke 6,4, XNUMX sentimita asatọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Xiaomi Max bụ onye ọrụ ugbu a
Ekwentị a mara mma nke ukwuu, agbanyeghị na enweghị m nnukwu ego ugbu a, ọ bụ ya mere m ji na-eche echiche ịzụrụ Bluboo Mayan nke na-ere $ 69.99. kwesịrị ya